ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ကို အစီအစဉ် (၁၅) ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နဝမနေ့ အစီအစဉ်ကို ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Mikael Hemniti Winther အား ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတို့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်များနာယူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးတို့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များ နာယူခြင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ဇူလိုင်လ ၁၄ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ( C ) ဆောင်ဒုတိယထပ် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းကော်မတီညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာ စကား ပြောကြားသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ကို အစီအစဉ် (၇) ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အဋ္ဌမနေ့ အစီအစဉ်ကို ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Ms. Julie Bishop ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Ms. Julie Bishop ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဇူလိုင်လ ၃ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း မီဒီယာသမားများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိ်ုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးတို့နှင့်အတူ ပြည်တွင်း အခြေစိုက်နိ်ုင်ငံခြားသတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းသတင်းစာ